‘पाहुना’ बाेक्ने पर्यटक बसका चालक नै मापसे गरेर सवारी हाँक्छन् ! « News24 : Premium News Channel
‘पाहुना’ बाेक्ने पर्यटक बसका चालक नै मापसे गरेर सवारी हाँक्छन् !
काठमाडौँ । जेठ २१ गते काठमाडौँबाट ४० पर्यटक बोकेर पोखरा हिँडेको ज१प १६० नंको पर्यटक बसका चालक मापसे गरेकाले ट्राफिक फन्दामा परे ।
जेठ २० गते राति ८ः१५ बजे २५ यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट बागलुङ जान लागेको ध१ख ६१३ नंको बस कलंकीमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा पर्यो । सोही दिन राति ८ बजे काठमाडौँबाट ३५ यात्रु बोकेर भैरहवाका लागि हिँडेको ना६ख १०८० नंको यात्रुबाहक बस कलंकीमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा पर्यो ।
जेठ २२ गते साँझ ४ः३० बजे काठमाडौँबाट ४० जना यात्रु लिएर बागलुङ जान लागेको बा५ख १५५४ नंको बस ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पर्यो । सोही दिन साँझ ८ः३० बजे काठमाडौँबाट ३० जना यात्रु लिएर विराटनगर जान लागेको ना६ख १५६१ नं को बस जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पर्यो ।
उपत्यकामा हाल ४० ट्राफिक प्रहरी एकाइबाट ट्राफिक व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । उपत्यकामा ११ लाखभन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्छन् भने नेपालभर २७ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन रहेका छन् । (रासस)